Nzvimbo Yemahombe Kutarisa N Mafambiro | Danai kwatiri: 993.702.7574
Mharidzo kubva kuMAD Desk
Pamusoro kutengesa Mapokaji
Spiritual Tourism Odisha
Buddhist Tourism Packages Muna Odisha
Eco-Wildlife Tourism neSand Pebbles
Exclusive North East Holiday Package
East India Kunoshamisa Tour Package
Eastern India Hill Stations
Kerala Extravaganza Mazororo
North East Triangle Tour Packages
Andaman Ane Havelock Island
Kuratidzwa kuSri Lanka
Kukukwazisa kubva kune Sandbridge Pebbles Tour N Mafambisi - anonyanya kushanya anotarisa Odisha iyo inobata mweya yevanhu vakawanda vane magnetic packages uye ancillary services. Nzvimbo dzeSvondo Mapurisa Nifambiro yakagamuchirwa muZ1993 kuBhubaneswar - iyo inokosha guta guru rinozivikanwa semutambo wekutarisa nzvimbo uye inofadza kuenda mberi kune Odisha. Nzvimbo dzeMatombo Ekutenderera Nemahofisi ekufambisa ari munzvimbo dzakasiyana-siyana uye anogara ambience inofadza.
Kambani iyi, pamusoro pemakore yakagadza bhora richifambisa seyokutanga kutenderera uye sangano rekushanyira nekutsvaga kunze kwezvinhu zvinotyisa zvinotenderera nemafambiro anotyisa anotarisa Puri Special Tours, North East Tours, Bhuti Cruise, Weekend Getaways, Bhubaneswar Special Tours, Discover Mini Amazon - Bhitarkanika, Odisha Spiritual Tour, Chilika na Odisha Golden Triangle, RathaYatra Special Package, Buddhist India Gateway ku Odisha, Inchanting Beaches of Odisha, Exclusive Odisha Tribal Tour, Sanctuaries of Odisha .... kutaura zvishoma. Izvo zvose zviripo zvakagara zvarongwa zvakashambadzirwa mapurati uyewo mapurisa anotenderera akasiyana-siyana achiwedzera kusangana kwakasiyana-siyana kunofadza vatengi kunonzi Odisha Tribal Tours ne Temples, Buddhist Trail Odisha neBhubaneswar - Puri - Konark - uye zvizhinji zvakawanda ...
Mhenderekedzo yeguruva inoshandiswa mhemberero mumhando dzakawanda dzebasa rinobatsira. Iyo kambani yakagadzira mufananidzo wakajeka munharaunda ye Car Rental Services uye yakagadzirirwa zvikepe zvekunakisa zvemazuva ano motokari uye vadzidzisi. Kushanyirwa kweMatombo eSebvu kunosasa pasina dombo rakashandurwa kuti ripe vatengi varo zvakanakisisa kufara uye kuvhara gumbo rayo nezvose zviri ikozvino mune yekushambadzira mhizha. Iko kambani yakawedzera huripo huri hugaro hwekuisa-up muPuri, Gopalpur, Bhitarkanika, Delhi naKolkata mukuedza kwayo kwakasimba kuti vasvike kune vamwe vatengi.
Nzvimbo dzeMatombo Ekutenderera N Nzendo dzinozivikanwa neUniversity of Tourism, Govt. yeIndia sechikwata chakapiwa simba rekupa hutano hwehutano hwakanaka kuvashanyi. Inobvumirwawo neIATA. Iyo ikambani inhengo yemasangano anoremekedzwa akadai seIATO, UFTAA, ITTA, ADTOI, TAAI, ATOAI, FHRAI uye TAAO.
Sandwende Mabheji, piyona wekutarisa anotarisa Odisha anozvipira kupa hutano hwakasiyana uye hukuru hwehutano hwakakoshesa kune vatengi vayo, zvichienderana nekushandurwa kwemadidigms emakambani ekushanyirwa. Kuratidzwa kwakakwirira uye kugamuchira vaeni kwakarongedzwa zvakanyanya neboka rakanaka uye ryanyanzvi rekushanyirwa kweSandle Pebbles rave riine kukosha kwenguva refu, nguva uye zvakare kufambisa chimiro chesimba. Muchikamu chekugadzirwa kwezvibereko nekusimudzirwa, kambani yacho yakaenda makiromita yakaiswa nemakwikwi ekukwikwidza. Vane ruzivo rwemauto vanofunga, ruzivo, uye vanoisa mumagetsi ese; zvinhu zvakasiyana-siyana zvekushanyirwa uye mabasa anofadza vatengi. Izvi zvinosanganisira eco, tsika, zvekunamata, zororo, mhuka dzomusango, uye MICE, saka dzinopa zvido uye zvinangwa zvevanhu vakasiyana-siyana.
Odisha inotora vatashamisi vakawanda vanofamba vachibva kunyika yose. Shanje reMatombo eEbvu iri muzvinhu zvakakura kubvira makore gumi nehafu vachitora nhamba yakawanda yevashanyi uye vachivapa mafambiro akanaka kwazvo, rubatsiro rwekufambisa, uye rubatsiro rwemashoko. Izvo zvinowedzera mabhizimisi zvinokurudzira zvinosanganisira maitiro anoshamisa, masangano ekugadzirisa, uye neo-mikana yakasimbisa kumira kweSandle Pebbles tour zvakanyanya semutungamiriri webhizimisi rekushanya muEast India. Iyo nzira yakagamuchirwa nekambani kuti ive nechokwadi chekusagadzikana kwehutano hwehutano uye hukuru hwehutano hwehutano hwakakonzera kurumbidzwa kubva kumativi akasiyana-siyana.
Inobvunza isu / Contact Us
Your Email * Message Your
Rwendo rweSandara matombo rwunofamba mberi nemweya usingakoshi. Kubwinya kwe East India uye North East India iri pakunamatira kwako, kungovhara pa chic ne swanky platform yakapiwa neSand neRwendo reTebbles uye sangano rezvenyanzvi nekwenyanzvi penchant for excellence rinoita kuti zviitiko zvinogutsa zvigutsikane.
Kushanyira kweSango kweSebvu kune bhasika risina kuzara yakazadzwa ne plethora yekunakidza mapaji. Ive iyo Wildlife, Inofadza, Inamata, Pilgrim, Cultural & Heritage, Zororo, MICE .... pane makumi mapfumbamwe pamakadhi ekutengesa kuda kwako. Zvaunofarira zvinonyanya kukoshesa kurwendo rweSandle Pebbles - kana Free Independent Tour kana Group Inclusive Tour ... tine zvakanakisisa zvatinokuitira.
Kwemakore aya, kutarisa kweSand Pebbles kwakagadzira kuvapo kwayo kunonyanya kufanana nepamusoro-nhepfenyuro yevatariri Odisha uye Car Rental Service provider.
Kubva kune-on-dot, nokukurumidza, uye yakarongeka Car and Coach Services painck of call - Sand Pebbles tour pamusoro penguva yakati yasvika sezita remhuri uye yakava kuda kumapoka evanhu muOdisha. Zvikepe zvinoshamiswa zvekambani zvine zvakawanda zvinopfuura 60 air conditioned zvinodhura motokari dzinosanganisira Mercedes Benz, Skoda Superb, Honda Civic, Toyota Corolla, Honda City, Toyota Innova, Tata Indigo, Mahindra Logan, Mahindra Scorpio, Mahindra Bolero, Tata Indica , Tempo Mufambi, Mini-Vans uye Coaches. Pakutungamira vane ruzivo rwakanaka uye vanogamuchira vaenzi vatungamiriri vanopa iyo yunifomu yekambani. Kambani inonamata inotora mhinduro kubva kune vatengi pamabasa evanotyairi uye inogara ichivanyorera pamusoro pemitemo yekufambisa. Vatyairi vanopiwa mafoni uye vanoramba vachikurukura nevatungamiriri.
Shanduro dzeMatombo dzinoshandiswa nevatengi dzinoita shanduko dzinosanganisira urongwa hwemaminerari emvura mabhodhoro, pepanhau reChirungu, icebox, mapepa emucheka, bhokisi rekubatsira rokutanga uye musambura mumotokari dzaro dzose. Zvose motokari dzakagadzirirwa mabhandi emakumbo uye zvimwe zvigadzirwa zvekuchengetedza uye zvigadzirwa. Iko Car uye Coach Rental Rental dzinopiwa 24X7.
Mukubvumirana nekutsvaga kwakanyanya kwe-off-the-beaten-track nguva dzezororo dzinobvira kubva kune monotony uye kudhakwa kunobatanidzwa nehukuru hwehupenyu hwemaguta, Shanje Pebbles tour yakagadzira nzvimbo inoshamisa muBhitarkanika National Park. Iyi yekugara kwemafungiro ezvinyorwa zvekuchengetedzwa kwemhepo yakave yakasimbiswa 'Jungle Resort'. Bhitarkanika inzvimbo yakasiyana-siyana yemasango eMangrove akashongedzerwa nemiti yakawanda uye matope, ari munzvimbo yeKendrapara yeHodisha. Chimwe chezvinhu zvikurusa zvinokonzera mangrove kuIndia, Bhitarkanika kune mhando dzakasiyana-siyana dzemhuka nemhuka. Sand Pebbles Jungle Resort yakagadzirirwa kuisa mukati mevashanyi manzwiro ehumwe nemasikirwo. Iyi sarudzo yakashanduka kuva 'inofanirwa kugara nzvimbo' mufambiro yevamwe vanoita zvechizvarwa. Shanje reSwavheji reSwande rakaita chiratidzo chisingakanganwiki sebhizimisi rebhizimisi rekufamba. MICE yebhizimisi iri mukambani inotsanangurwa se 'ace yeramangwana'. Kushanyira kweMatombo eSebvu kunounza bhizinesi uye kurega zvakanyanya pedyo. Odisha ndeyechokwadi inoshuva uye inofadza MICE yekuenda uye kuti inakidze mutengo wemakiti yeMICE, rwendo rweSand Pebbles rwakagadzirira zvirongwa zvakasiyana-siyana. Nzvimbo dzakanaka dzekutengesa zvinogona kuita kuti kutarisa kweSand Pebbles kugovera kana kudzivisa makamuri ehotera, kuvhara mafungiro emhepo, uye kuita kuti varaidzo ifare. Ichokwadi chekushandira kwekushanyirwa kweSandle Pebbles kunoshuva kukwezva bhizimisi rekuitika kese.
Nzvimbo dzeSvondo Zviitiko 'n' Entertainment Group, imwe ye Sand Sand Pebbles Tour 'n' Travels inozivikanwa neIndia Tourism, Govt. yeIndia uye Dhipatimendi reZvakatori, Govt. Odisha. Iyi mapiro inowanikwa muguta guru reAdisha - Bhubaneswar. Basa rekuchengetedza riri kutaridzika sechibvumirano chekushanyirwa. Iko kune kukwidzika mune bhizinesi rebhizimisi muOdisha. Rwendo rweSvondo Marwendo rune manyawi ekuve nemubatsiro weGala kubudirira kwebhizimisi yekugadzirisa muHurumende. Rwendo rweSepet Pebbles rwakagadzirirwa kusvika kune shongwe dzepamusoro-soro pamwe nekushingaira uye kugadzira unyanzvi hunyanzvi huchigunun'una nekushanda nesimba. Icho chinangwa chikuru chekambani ndechekupa maitiro akasiyana kune avo vanokoshesa vateereri kuburikidza nekutarisa kune zvinokosha-based, mazano anotarirwa nevanhu.
Rwendo rweMatombo eEjecha runoparidzira zvikuru mabhuku ehurukuro uye akawandisa uye mamwe mabhuku ekutsvaga anowanikwa chaizvo. Iyo inofadza inofanirwa kutenderera kweSandle Pebbles inokurudzira chikwata chekupedzisira muOdhaisha. Inotsigira mararamiro emarudzi ekushanyirwa uye mikana yakawanda yevatashanyi kuti vave nehukama hwepedyo nehuwandu hwemhando dzechimiro dzakatsigirwa nemadzitateguru eOudisha. Rwendo rwechikwata chekufambisa kwekambani rinofumura ruzivo rwakakosha rwevanhu vomunharaunda vehurumende; tsika dzavo dzinosimudzira uye tsika. Vatashanyi vanopiwa nzira dzakakwana dzokupupurira mitambo yavo yakaisvonaka inopemberera mararamiro ehupenyu akasiyana-siyana inobatanidza kuchengetedzwa kwezvizvarwa zvakasiyana. Odisha anotsvaga nzvimbo inokosha mumapu evanhu veIndia kuti ave nemarudzi akasiyana-siyana emadzinza emarudzi. Kuwanda kwematambudziko kunowanikwa munzvimbo dzeKoraput, Rayagada, Naurangpur, Malkangiri, Kalahandi, Kandhamal, Baudh, Keonjhar, Sundargarh uye Mayurbhanj. Sandwende Pebbles Tribal Tours inopindira nzvimbo idzi dzose uye inotora zvinyorwa zvemashoko uye zvinotaridzirwa zvinyorwa zvevanhu vemunharaunda. Kune vatashanyi vanofambisa mutsika, rwendo rweSande Pebbles runopa mapegiji ekusimudzira. Mhemberero dzose dzinogadziriswa mumitambo yekare yekambani. Vatashanyi vanowana mukana weupenyu hwose kune vanhu vazhinji mumitambo yehutano yeOudisha munguva dzegore. Kubwinya uye kufara kwemitambo yakakura yemitambo yakafanana nePuri International Beach Festival, uye Mutambo weKonark unoita kuti vatashanyi vaone nezvekugadzirisa mararamiro.
Odisha ine zvakawanda zvisingatauri kumaruwa kunzvimbo dzekutarisa. Kunze kwekunaka kwekunaka kwezvinhu izvi zvinoshamisa zvekushanyira nzvimbo, chii chinoita kuti vatashanyi vave nhoroondo, tsika dzemitauro, zviratidzo zvechitendero, uye zvekuchera matongo. Nzvimbo yakasara yekushanyirwa kwekumaruwa muOdhiisha inoparadzirwa nemapakiti epakati pekushanyirwa kweSandra Pebbles. Kambani inobatanidzwa zvakakosha mukusimudzirwa kwemitambo yemagariro emunharaunda munzvimbo dzekumaruwa dzakadai saRughurajpur. Inoita kuti vatashanyi vave nemanzwiro ehukama kune mararamiro emararamiro emagariro ekumaruwa uye inovhura nzira yekusimudzirwa kwavo. Vatashanyi vanotsvaka zvakawanda 'zvepedyo' uye 'zvechokwadi' kutaurirana nevanhu vomunyika yeOdisha. Zvinyorwa zvekushanya kweSandra Pebbles zvakagadzirirwa kugadzirisa Odisha uye nyika dzakapoteredza seJharkhand, Madhya Pradesh, neKhhattisgarh dzinopoteredza panorama yemunharaunda aya ma States kuratidza maonero ekucherechedza akadai semasimbe, minda, nzvimbo inonakidza yemakomo, mhando dzakasiyana dzemisha uye shiri, mhemberero, peji .... uye urongwa hwakakwana.
Terms uye Conditions Reservation Policy Cancellation Policy Blog Testimonials Taura nesu Sitemap E-Broucher
Nzvimbo dzeMatombo Matswende © 2019. Zvose Zvakachengetedzwa
Blog Testimonials udza mashoko
Terms Reservation Policy Cancellation Policy Sitemap E-Broucher
Kumbira foni zvakare
KUDA KUTI BACK
Isa zvinhu zvako pasi apa kuti ukumbire kudana zvakare uye tichadzoka zvakare patinosangana nekukurumidza.
zita * runhare *